Akhriso;War-Murtiyeedka laga soo saaray kulan ay yeesheen hogaamiyaasha Kenya iyo Ethiopia.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa soo gabagabeeyay booqasho qaadatay muddo labo cisho ah oo uu ku joogay dalka Kenya isagoo la kulmay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wadahadleen xiriirka u dhexeeya iyagoo gaaray heshiisyo taariiqi ah oo ay ka mid yihiin arrimaha ammaanka, Ganacsiga, dalxiiska iyo iskaashi dhaqaale.
War Murtiyeed laga soo saaray kulanka labada hogaamiye ayaa lagu sheegay in labada dalba ay qorsheynayaan inay xaqiiiyaan nabad ka dhalata dalka Koofurta Sudan iyo weliba in laga hortago halista ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Arrimaha dalka Soomaaliya ayaa War-Murtiyeedka lagu xusay awooda Al-Shabaab ee sii kordhaysa iyo taageero la’aanta ay la kulmayaan ciidamada Nabad ilaalinta AMISOM.
“Labada hoggaamiye waxa ay hoosta ka xariiqayaan halista uu ururka Al-Shabaab ku haya dalka Soomaaliya iyo gobolka. Sidaa awgeed waxaan qireynaa debecsanaanta taageerada caalamiga ah ee dalka Soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha ku baxa ciidamada AMISOM.”ayaa lagu yiri war murtiyeedka.
Sidoo kale war murtiyeedka ayaa lagu xusay in ay labada hogaamiye ay raadin doonaan sidii taageero dhaqaale loogu heli lahaa ciidamada AMISOM iyo weliba tababar la siiyo ciidamada dowlada Soomaaliya. Hogaamiyaasha labada wadan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay halista ay ku tahay dalka Soomaaliya farogelinta ay wadamo shisheeye ku hayaan.
Wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa ciidamo ka socda waxa ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta AMISOM waxaana shalay dhowaan 9 ka mid ah ciidamada Kenya ay ku dhinteen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday meel ku dhow magaalada Dhoobley oo ku taal xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya.(Jwhrn)